Naanna'insa Unkaa Irraa
Kabalii Naanna'insa Unkaa sajoowwan akka gabatee kuusdeetaa ykn mulannoo deetaa too'atu of keessaa qaba. Kabalichii galmee isa dirreewwan of keessaa qabu isa kuusdeetaatti walqabatee jalatti mul'ata.
Kabalii Naanna'insa Unkaa galmeewwan keessa siquuf akkasuumas galmeewwan saaguu fi haquuf itti fayyadamuu nidandeessa. Yoo deetaan unka keessatti olkaa'amee, jijjiiramichi gara kuusdeetaatti darba. Kabalii Naanna'insa Unkaa akkasuumas fo'aa, gingilchaa, fi galmeewwan deetaatiif dalagawwan barbaachaa of keessaa qaba.
Sajoo kabala Naanna'insaa, kabala Naanna'insaa Too'annaa Caalaa irraa unkatti ida'uuf fayyadamuu nidandeessa.
Kabala Naanna'insaa, unkawwan kuusdeetaatti walqabataniif qofa mul'ata. Unka kan Mul'annoo Saxaxaa keessatti, kabala Naanna'insaa hinmul'atu. Akkasuumas Kabala Deetaa Gabatee ilaali.
Dalagawwan fooyinsa fi gingilchuutiin mul'annoo deetaa too'achuu nidandeessa. Gabateewwanii xabboo hin jijjiiraman.
Ajajii fooyi ammaa ykn gingilchaan galmee ammaa waliin olkaa'amu. Yoo gingilchaan qindaa'ee, sajoo Gingilchaa Fayyadami kabala Naanna'insaa irraa kakaa'aadha. Amalawwanii fooyinsa fi gingilchaa galmee keessaa, akkasuuma qaaqa Amalawwan Unkaa keessatti qindaa'uu nidandaa'a. (Amalawwan Unkaa - Deetaa - Amalawwan Fooyi fi Gingilchaa filadhu).
Himii SQL yoo unkaaf bu'ura tahe (Amalawwan Unkaa - caancala Deetaa - Madda Deetaa ilaali), kana booda dalagawwanii gingilchaa fi fooyii kan mul'atan yammuu himii SQL gabatee tokko qofaaf yammuu wabii tahu qofaaf, yammuu haalata SQL dhalootaa keessatti hinbarreefamne qofa.
Lakkoofsa kuusaa ammaa mul'isa. Gara kuusaa walitti dhufootti deemuuf lakkoofsa tokko galchi.
Gara galmee isa jalqabaatti sigeessa.
Gara galmee isa duraaniitti sigeessa.
Gara galmee isa ittaanuutti sigeessa.
Gara galmee isa xumuraatti sigeessa.
Galfataa deetaa haaraa tokko olkaa'a. Jijjiiramichii kuusdeetaa keessatti galmeefameera.
Gaabbi: Galfata Deetaa
Galfata deetaa tokkoof baabbi sihayyama.
Kuusaa haaraa tokko uuma.
Galmee tokko haqa. Gafatichii haquun dura mirakaneefachuu barbaadda.
Deetaa mul'ataa haaromsa. Qeeyyaa fayyadamoo hedduu, deetaa ammee jiaachuu isaa mirkaneessu haaromsa.
Kuusaalee gingilchaa, qabeentaa dirree deetaa ammee irratti bu'ureeffate.
Gingilchaawwan unkaa irratti hundaa'e
Kaadimni kuusaa deetaa, deetaa mul'ataa ulaagaalee ibsamee gingichuuf kaasa.
Qindoomina gingilcha dhaamsa akkasumas kuusaawwan mara gabatee ammee keessaa mul'isa.
Madda deetaa akka gabatee
Weyta unkaa mul'annoo keessaa, gabatee dabalataa kaafnu. Dalaga Madda deetaa akka gabatee kaka'e, gabatee bal'ina unkaa olii keessatti ilaaluu dandeessa.
Gabatee mul'annoo gingilchamee fi hin gingilchamne gidduu jiru jijjiira.
Title is: Naanna'insa Unkaa Irraa